विनय तामाङको असली अनुहार सार्वजनिक : विनय तामाङलाई पहाडका जनताले भोट दिँदैन : शारदा राई सुब्बा - खबरम्यागजिन
Homeखबरविनय तामाङको असली अनुहार सार्वजनिक : विनय तामाङलाई पहाडका जनताले भोट दिँदैन : शारदा राई सुब्बा
April 30, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
सुब्बा भन्छिन्, ‘विनय तामाङलाई जनताले भोट दिँदैन किनभने पहाडमा 105 दिन जे भयो, उनैको कारण भयो। यत्रो वर्ष उनी जिटीएमा थिए, उतिखेर तृणमूल नष्ट गर्ने काम गरे। अहिले पनि गर्दैछन्। जनतालाई धम्की दिने, नियुक्तिहरूमा धाँधली गर्नेलाई जनताले भोट दिने छैन। यो कुरा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले बुझ्नेछिन्।’
दार्जीलिङ, 30 अप्रेल
तृणमूल काङ्ग्रेस नेतृ शारदा राई सुब्बाले अचानक नामाङ्कन पत्र बुझाएपछि पहाडको राजनीतिमा चर्चा चुलिएको छ। सुब्बाले नामाङ्कन बुझाउने वित्तिकै विनय तामाङको वास्तविक चित्र अघि राख्न शुरु गरेकी छन्।
उनले तीनवटा प्रमुख यथार्थ पर्दाफास गरेकी छन्। एक, पहाडमा शान्ति छैन। दोस्रो, अशान्तिको कारण विनय तामाङ नै हुन् अनि तेस्रो, विनय खेमामा व्यापक धाँधली। सुब्बाले निडररूपमा यति कुरा राखेपछि विनय तामाङको राजनैतिक चरित्र नै जोखिममा परेको छ।
सुब्बा भन्छिन्, ‘विनय तामाङलाई जनताले भोट दिँदैन किनभने पहाडमा 105 दिन जे भयो, उनैको कारण भयो। यत्रो वर्ष उनी जिटीएमा थिए, उतिखेर तृणमूल नष्ट गर्ने काम गरे। अहिले पनि गर्दैछन्। जनतालाई धम्की दिने, नियुक्तिहरूमा धाँधली गर्नेलाई जनताले भोट दिने छैन। यो कुरा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले बुझ्नेछिन्। यसपल्ट विनय तामाङ पनि निर्दलीय छन्, हाम्रो पार्टीले उम्मेदवार दिएन र म पनि निर्दलीय उठें।
आन्दोलनकालमा घर जल्नेहरू, भूमिगत हुने साधारण जनताको लागि आफूहरूले केही गर्न नपाएको भन्दै लोकसभामा पार्टीको निर्देश भएकोले अमरसिंह राईलाई सघाएको अनि निर्दलीय विनय तामाङलाई सघाउनु तृणमूल काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न अनिवार्य नभएको पनि बताइन्।
‘म व्यानर्जीको पद चिह्न पछ्याउँने नेता हुँ। समर्थकहरूले आग्रह गरेकोले मैले नामाङ्कन बुझाएँ। किन भने जनता विनयलाई भोट दिन मान्दैनन्। 105 दिनको जुन बन्द भयो र हिंसा भयो, त्यो विनयले नै गरेका हुन्, उनी नै थिए त्यसबेला सहसचिव र हर्ताकर्ता। बन्द घोषणा गर्ने उनी नै हुन्,’ सुब्बाले भनिन्, ‘उनकै कारण चियाबारीका श्रमिकहरूले दुःख पाए। उनीहरूले तीन महिनाको तलब पाएनन्। कृषकहरूले आफ्नो फसल बेच्न पाएनन्। सबैले विनय तामाङलाई सपोर्ट गरेकै हुन्। हिजो उनीहरूलाई सघाउनु हाम्रो पनि ड्युटी थियो। आज छैन।’
जब विनय तामाङ उपचुनाउको प्रचारप्रसारमा गए, उनले तुनाउ जितेर के काम गर्ने भन्नेबारे बताउनभन्दा धेर जनतालाई थर्काउने, धम्की दिने, गोजमुमो-2 को विरोध गर्नेहरूलाई स्थान्तर गर्ने खुल्लमखुल्ला धम्की दिन थालेपछि आफू निर्दलीय उम्मेदवारको रूपमा उठेको पनि उनले बताइन्।
‘विनय तामाङ उनको विरोध गर्नेहरूलाई 24 पछि हेर्छु भन्छन्। किन 24 मई पछि विनय तामाङको विरोध गर्नु? यस्तो धम्कीको विरुद्ध आजैबाट बोल्न अनिवार्य थियो,’ उनले भनिन्।
आफूले तृणमूलबाट राजिनामा नदिने तर पार्टीले कार्वाही गरे स्वीकार गर्ने भन्दै जतिखेर पहाडमा कोही थिएन त्यतिखेर आफूले पहाडमा तृणमूल शुरु गरेको बताइन्। ‘ममता व्यानर्जीले बुझ्नेछिन् भन्ने मलाई विश्वास छ, किन भने मैले पार्टीको उम्मेदवारको विरोध गरेको छैन, विनय तामाङ हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार होइनन्,’ उनले भनिन्।
भयमा पहाड र विनयको नियुक्तिमा धाँधली
सुब्बाले अर्को चाखलाग्दो यथार्थ उजागार गरेकी छन्। भन्छिन्, ‘पहाडका जनता भयमा छन्। आन्दोलनमा साधारण मानिसले दुःख पाए। यद्धपि मुख्यमन्त्रीले पहाडका मानिसहरूको निम्ति 16 वटा बोर्ड, युनिभर्सिटी, आइटिआई, कलेज, शिक्षक नियुक्ति दिए। तर त्यही नियुक्ति पनि ठिकसित भएन। पहिले एसएससी रिअर्गनाइज गरेर नियुक्ति गर्नु पर्ने हो, नियुक्तिमा गडबडी भइरहेको छ। प्रवक्ता सन्दिप छेत्रीले पो नियुक्ति पायो। उनी अर्कै स्कूलमा भोलेन्टियर काम गर्थे। सरकारको रुल अनुसार इन्टरभ्यु भएन। अझ हेर्दै जानुहोस्, उनीहरूको को कोले नियुक्ति पाउँनेछन्। यस्तोकाम गर्नको निम्ति विनय तामाङलाई जिटिएमा राखेको होइन।’
उनीले बारम्बार भनेअनुसार लोकसभामा ममता व्यानर्जीले गोजमुमो तृणमूल संयुक्तरूपले काम गर्ने निर्देश दिएकी थिइन्। हरेक बुथस्तरमा। एकएक पोलिङ एजेन्ट दिने कुरा थियो। तर तृणमूललाई पोलिङ एजेन्टसमेत दिइएन।
‘उनीहरूले तीनजनाको पोलिङ एजेन्टको फारम दियो। एक उम्मेदवारको तीन पोलिङ एजेन्ट हुन्छ? हाम्रै पार्टीको उम्मेदवारको लागि हामीले थर्ड पोलिङ एजेन्टको फारम भर्नु?,’ सुब्बाले अर्को यथार्थ पनि खोलिन्, ‘चुनाउको लागि जोइन्ट अफिस बनाइएको थियो। तर अफिसमा कोही आएनन्। उनीहरूबाट आलोककान्तमणि थुलुङ कोअर्डिनेटर थिए, यताबाट म। चुनाउको सबै कुरा यहीँबाट हुनुपर्थ्यो तर कार्यालयबाट केही भएन। त्यसबेला पनि मैले गुनासो गरेको थिएँ। कसैले सुनेन। हामीले बेग्लाबेग्लै चुनाउ प्रचार गऱ्यौं। अहिले उनीहरू नै भन्दैछन्, तृणमूल कार्यकर्ताहरूले भोट दिएन, भोट बिगाऱ्यो रे। तर याद राख्नुहोस्, अमरसिंह लामालाई जति जेन्युन भोट दियो, तृणमूलले नै दियो। चुनाउछेकमा उनीहरूकै मान्छे पो बरु विमल गुरुङ लिन बागडोगरा गयो।’
सुब्बाले भनेअनुसार विनय तामाङ उपचुनाउ उठ्दा पहाडका तृणमूल नेताहरूसित कुनै सरसल्लाह नै गरिएन।
‘उनीहरूले उम्मेदारिता दिँदा दुइ पार्टीबीच सहमति र बहस त हुनुपर्ने थियो। हामीलाई त सोधिखोजी गरेनन्। कुरा भएको भए हामी भन्थ्यौं, ‘विनय तामाङ उठ्यो भने हार्छ, धेरै राम्रा मानिसहरू छन्, उनीहरूलाई उठाउनुपर्छ। तर हामीलाई बोलाएन,’ उनले भनिन्।